Turkiga Sidee Erdogan Awoodani Yaabka Leh Ku Gaadhsiiyey Dalka Turkiga? | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Isagoo ka hadlayey xafladii furitaanka ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Dhismaha Adeegga Ataseher ee Magaalada Istanbul, Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri: “Turkiga wuxuu noqday jilaa gobol oo awood badan heer aan weligiis lagu arkin taariikhdiisa dhow.
Mowqifka dalkeenna ee qiimeynta tusmada xoogga adduunka ayaa sii kordheysa sanad kaste oo la dhaafo.
Waxaan hada ku dhow nahay hadafkeena weyn ee Turkiga. Tanina Waa Qeyb yar oo ka Mid Ah Hadafkeena Awooda dalkeena Ilaa 2023, waxaan ka dhigi doonnaa Turkiga awood aan la xakamayn karin. ”Ayuu Raaciyey Erdogan.
Heerka Awooda dalka Turkiga ,Waxaa Lagu Qiimaynaya Qudbad Samayn badab Leh oo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ka jeediyay munaasabaddii furitaanka Dhismaha Adeegga Maaliyadeed Iyo Samarta Korontada.
Isagoo ka hadlaya aaminaadiisa ah in Turkiga uu u istaagi doono waqtigani dhaqaalaha adduunka, Madaxweyne Erdoğan, isaga oo xusay in Dalalka qaar ay khalkhal gelineyso xaqiiqda ah in Turkey ay ka baxday Heer Wixii la Doonayo Lagu Cadaadiyo.
Dhinac Kasta, laga bilaabo daryeelka caafimaadka ilaa wax soo saarka Dhaqaalaha, “Ma ogin waddan kale oo kula tartami doona adeegyada ay Turkigu ka bixiso aag kasta, gaar ahaan dalxiiska iyo daryeelka caafimaadka.”Waxaa Yidhi Erdogan
Isaga oo tilmaamaya go’aanka Midawga yurub ee Car Qaladaynta Turkiga, Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri: “Shaki la’aan waxaa jira wadamo ku dhaqma qaab mabda ‘leh arintan. Tusaale ahaan Boqortooyada Ingiriiska. Iyaga oo ka reebay Turkey karantiil Lagu hayey, waxay abuureen jawi ay labada dal ku guuleysan doonaan.
Arrintan, waxaan u mahadcelinayaa Mudane Boris Johnson, gaar ahaan anigoo ku hadlaya magaca qarankayga. Waxaan rajeynayaa in wadamada kale, qaarada Yurub gaar ahaan, ay qaadan doonaan isla habkaas sida ugu dhaqsaha badan.
Erdogan ayaa carabka ku adkeeyay: “Turkigu wuxuu noqday jilaa awood oo heerkiisu yahay heer aan weligiis lagu arkin taariikhdiisa dhow.
Hadaba Sidee Turkiga halkani Kusoo Gaadhsiiyey Erdogan.
Awooda Turkiga waxa kaliya Aynu kasoo qaadan karnaa Waa Awooda Ciidanka Badaha,iyo Heerka Turkiga Doonayo Inuu Aduunka Hogaamiyo,Hamiga Erdogan.
Turkey Ayaa sameysay maalgashi balaaran hagaajinta difaacadeeda maraakiibta tobankii sano ee la soo dhaafay, kordhinta tirada maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta militariga Iyadoo La Adeegsanayo teknolojiyada Lagu Farsameeyey Gudaha Turkiga.
Turkiga, oo ah dal u dhexeeya Yurub iyo Aasiya, oo xuduud la leh saddex badeed dhinaca woqooyi, galbeedka iyo koonfurta, wuxuu sameeyay dadaallo badan sannadihii ugu dambeeyay si uu ugu hormariyo Awooda Badaha ilaa heer ay kula tartami karto quwadaha adduunka.
Turkey waxay sameysay maalgashi balaaran hagaajinta difaacadeeda maraakiibta tobankii sano ee la soo dhaafay, kordhinta tirada maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta militariga iyo ku tiirsanaanta teknolojiyada guriga.
Sanadihii la soo dhaafay, Ankara kaliya Maysan Kordhin tirada maraakiibteeda dagaalka, waxay Kordhisey ilaalinteeda xuduudaheeda iyo Kuwa biyaha caalamiga ah, laakiin waxay sidoo kale sameysay isku filnaansho muhiim ah oo lagu cusbooneysiinayo ciidamadeeda badda, iyada oo ku tiirsan Qalabka Gudaha Dalkeeda,si loo yareeyo ku tiirsanaanta dibadda. awoodaha Dalka.
Raayan Jengerees wuxuu qoray: “Inkasta oo sharci dajiyayaasha Turkiga ay muddo dheer kobcinayeen rabitaankooda ah inay Turkiga ka dhigaan mid ku tiirsan hubka shisheeye iyo tikniyoolajiyadda, Debada.
[Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip] wuxuu si weyn u kordhiyey kharashaadka gaashaandhigga ,Wuxuuna si dardar leh uga shaqeeyey inuu kor u qaaddo iskaashiga gobolka ee qandaraasleyaasha difaaca ee wadaniga ah,” ayuu qoray Ryan Gingeras, khabiir ku takhasusay waaxda arrimaha amniga Badaha iyo taariikhda Bariga Dhexe.
Laga soo bilaabo 2007, qarashka ku baxa Turkiga, horumarka ayaa si aad ah u kordhay, iyadoo la jaan qaadaya heerarkiisii ​​hore, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay koox warshadaha difaaca ah. Sanadkii la soo dhaafay, waxay dhaaftay $ 1.2 bilyan, sahaminta ayaa muujisay.
Ciidamada Badda Turkiga waxay lahaayeen ilaa 112 markab oo militari , laakiin Ankara waxay qorsheyneysaa inay wadar ahaan ku darto 24 markab oo cusub, oo ay kujiraan afar markab, kahor inta uusan Jamhuuriyadu gaarin sanadguuradii 100aad ee markii la asaasay 2023.
Mid ka mid ah Maraakiibtani Waa, TCG Anadolu waa markab Ka Mid Ah Kuwa Ugu Awooda Badan, oo u oggolaanaya waddanka inuu ku biiro ,Dalalka Leh Maraakiibta diyaaradaha xambaara. Anadolu, oo loo qorsheeyay inuu ku biiro howlgalada firfircoon ee Ciidamada Badda ee Turkiga sannadkan.
Anadolu waa “markab dagaal ee ugu weyn Turkiga , markii Laga Yimaado Markabka TCG Yavuz, oo ahaa Markab dagaal ” ayuu qoray Richard Parley, qoraa militariga Mareykanka ah iyo bare.
“Anadolu waxay siin doontaa ciidamada Bada ee Turkiga awood aan caadi aheyn oo weerar kadis ah Ilaa Badda Madow iyo Bariga Dhexe,”
Markabka dagaalka, oo Lagu Dhisay iskaashi wada jir ah oo ay ku jiraan shirkad Isbaanish ah Navantia iyo shirkad Turkiga ee, Sedef Shipbuilding Inc, ayaa muujineysa hamiga dalku inuu yahay xoog awood ku leh Badda Mediterranean sida Boqortooyadii Cusmaaniyiinta,qarnigii 16aad.
Taariikhdu waxay ina tuseysaa in dalka leh awooda ciidamada badda ay markasta u Hogaaminayaan Aduunka inay noqdaan kuwa ugu sarreeya.
Dal aan lahayn awood baddana waa daciif. Hulusi Akar, Wasiirka Difaaca Turkiga, Ayaa Yidhi intii lagu gudajiray xafladda lagu soo dhaweynayay TCG Kinaliada, oo lagu soo saaray barnaamijka qaran ee waddanka ayuu yiri Hulusi Akar.
Awooddiisa buuxda ee Markabka , Anadolu Wuxuu awood u yeelan doontaa 27,000 oo tan, isagoo dhererkiisu yahay 231 mitir,halka ballaadhkiisu yahay 32 mitir, Wuxuu sidoo kale Gaadhi karaa xawaare dhan 39 kilomitir saacaddii.
Maraakiibta dagaalka Ayaa Qaadaya helikabtarro iyo diyaaradaha drones-ka ah.
“Qorshayaasha Turkiga ee lagu dhisayo Awooda Maraakiibta ,waa hal calaamad oo ah dadaalka Ankara ee guud ahaan lagu hormarinayo laguna ballaarinayo waaxda difaaca qaranka,” ayuu yiri Gingeras.
Turkiga wuxuu doonayaa inuu Ku tartamo Badda Mediterranean xuquuqdeeda badda ee gobolka iyada oo la horumarinayo awoodooda badda, kuwaas oo sidoo kale muhiim u ah in la sugo danaha dhaqaale ee waddanka.
“Iyada oo in kabadan boqolkiiba 87 ganacsiga wadanku uu ku socdo dekedaha bada ee soo gala, iyo dhowr dhuumood oo caalami ah oo ka gudbaya xuduuda Turkiga, awoodaha ciidamada bada ee wadanku waxay u muuqdaan kuwo si aad ah ugu caanbaxay fekerka casriga ah ee Turkiga,” Gingeras ayaa qoray.
Sidaas darteed, Turkigu Hadafka Turkiga Waa Si kor ugu qaadaan teknoolojiyadooda dhinaca badda ah ee gaaska iyo dadaallada kale ee sahaminta badda ee bariga Mediterranean-ka, halkaas oo dhowaan laga helay keydka gaaska hodanka ah.
“Rabitaanka Dhinaca xeebta Qubrus waxay si gaar ah u dareensiisay dadka siyaasada dejiya ee ku sugan Ankara. Bilaabidda howlgalada qoditaanka Turkiga, iyo sidoo kale qorshayaasha la sheegayo ee ah dhismaha saldhig cusub oo ciidamada badda ee Turkiga ay ku leeyihiin waqooyiga Qubrus, ayaa ah astaamaha ugu dambeeyay ee ay qorsheeyayaashu ugu talo galeen inay saameyn weyn ku yeeshaan Bariga Dhexe, ”Gingeras ayaa arkay.
Marka laga soo tago danaheeda dhaqaale, Turkiga wuxuu sidoo kale doonayaa inuu lahaado awood badeed xoog leh ,Dhinaca Sadexda Badood, ee Loogu Yeedho “Blue Homeland”, si loo hubiyo amnigeeda qaran.
Bishii Maarso, Ankara waxay dunida u muujisay Awoodeeda ku aaddan dhismaha ciidan badeed oo awood leh, oo isla mar ahaantaasna ku qabta hawlihii ugu weynaa ee markab badda oo ay in ka badan 100 maraakiib milatari ku leeyihiin saddaxdeeda baddeeda. Layliyada waxaa sidoo kale lagu magacaabay “Blue Homeland”.
Marka laga soo gudbo Badda Mediterranean-ka iyo biyaha kale ee qaranka, Turkiga wuxuu sidoo kale ballaariyey joogitaankiisa badda iyadoo ciidankiisa u diraya dalal aad u fog, laga bilaabo Soomaaliya ilaa Sudan iyo Qatar, marin u helidda aagagga Badweynta Hindiya illaa Badda Cas iyo Gacanka.
Previous articleDAAWO VIDEO:Suuragalnimada in Kheeyre la Bedelo & Shaqsiga u calaameeysan Farmaajo (Xog-baaris)
Next articleDAAWO VIDEO:Chiinaha oo Dhoolotus Yaab leh ka Sameeyey Xeebaha Soomaaliya Waqooyi Damaca Taiwan Iyo Maraykan ka Dhan Ah.